Waa sheeko gaaban kala soco bogaan waa sheeko jaceyl ah oo dhab ah ma ahan qiyaali Q Koowaad | Somaale.com
Waxaa la joogay duhr qorax dheer ah oo ay cadceedu si aad ah u kulushay dhamacda iyo falaaraha cadceeda ayuu qof waliba dareemaya dhinbilaheeda iyo shucaaceda. Qof walibana waxa uu aad ugu mashquulsanaa in uu iska masaxa dhididka faraha badan ee qoraxdu keentay.
Waxa ay aheed xili laga soo baxay iskuulada qeybta subaxleeyda isla markaana ay galableeydu galayaan dadka shaqeeyaana ay ka soo rawaxayaan shaqada isla markaana ay dadka galinka danbe galayaana ay u caraabayaan shaqada.
Gaadiidka dadweynaha ayaa aad u yaraa oo waxaa magaalada ka jira shidaal la’aan kaalimaha shidaalkana waxaa loogu jiraa feeylal dhaadheer qof walibana waxaa u sii dheer daalka iyo kuleelka sidii uu ku gaari lahaa gurigiisa oo mar uun caasi u raaci lahaa.
Xaalku ma sahlana qof walibana wa xoogiisa iyo dadaalkiisa oo baabuurta xoog baa lagu korayaa marka ay busteejada yimaadaan. oo waxaa jira is riixriix aan u wanaagsaneen dumarka iyo dadka waaween sidaas darted waxa aad u baahantahay in adigoo nabad qaba in aad gaariga dhaxdiisa gasho ama kursi hel ama waaye.
Faadumo Deeqa waxa ay ka mid tahay ardayda maalinkaa taagan busteejada waxa ayna sugeysaa in ay mar uun cagta la hesho baska ay ku gaari laheed xaafadeeda faadumo deeqo waxaa si aad ah ugu mashquulsan maxamed oo si gaara isha ugu haya kuna mashquusan quruxda aan la soo koobi Karin ee alle hibada u siiyay.
Baskiiba yimid maxamed waxa uu noqday qofkii sadaxaad ee gala waxa uuna saaray kursi loogu talo galay 2 qof buugaagtiisii qeyb ka mid ah qeybna isagaa ku fariistay hase yeeshee oday baa inte iska qaaday yiri war anigi baaba heysan kursi ee yaad u heysaa hadaad adigu heshay
Maxamed Warsame Qasali IYo Saado Cali Warsame Heeskii Dhabta la Isku Eegaa 0
Dib u dhis iyo casriyeyn ka socda garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho